"Xeerka cimiladu maahan mid la hir gelin karo" - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jimmy Åkesson wareeysigii Ekot ee hoggaamiyeyaasha xisbiyada.
"Xeerka cimiladu maahan mid la hir gelin karo"
La daabacay torsdag 16 augusti 2018 kl 17.28
Wareeysigii laanta wararka Ekot ee hoggaamiyeyaasha xisbiyada dalka oo saaka lala yeeshey Jimmie Åkesson, hoggaamiyaha xisbiga Sverigedemokraterna ayuu ku sheegay in aanu aaminsanayn in dabkii baaxadda lahaa ee dhowaanahan ka holcayay keeymaha dalka Sweden uu ka dambeeyo is-bedelka cimilada ee caalamka.
-Ma diidani inuu jiro is-bedelka cimilada, ma diidani inay masuuliyad ka saran tahay dhammaan waddammada caalamka xitaa Sweden sidii lagu dhimmi lahaa saameeynta cimilada. Hase yeeshee ma aaminsani in kharash lagu kabo iibsiga baaskiillada korontada ku shaqeeya, koorasyo lagu bixiyo sidii lagu yareeyn lahaa welwelka cimilada laga qabo iyo wixii la mid ah ee dawladdani ku howlan tahay, inay yihiin kuwo wax lagaga qaban karo is bedelka cimilada, sida uu sheegay Jimmie Åkesson, hoggaamiyaha xisbiga SD.
Laakiin waxaa jira xeerka cimilada oo xisbiyada dhammaantood saxiiseen, marka laga reebo xisbiga SD oo oranaya in wasakhda hawada la baabi’iyo ugu dambeeyn sannadka 2045 . Xisbigaaguna uu leeyahay inuu diyaar u yahay siduu wada hadal ula geli lahaa garabyada xisbiyada. Diyaar miyaad u tahay marka inaad aqbasho xeerkaa?
-Waxaannu ka hadleeyno maahan dastuurka dalka u degsan. Haddii aan daacad u hadalno u maleeyn maayo inay jirto cid ay ka suurtowdo inay fuliso xeerkaa. Waa hadal un la hayo. Inay suurtagal tahay ma aaminsani in cimilada wasakhda laga joojin doono dhammaan 2045.
-Wax dhib ah kuma qabo xeerkan, laakiin ma jiri doonto cid hir-gelisa. Dhammaanna waa la jebin doonaa, sida uu sheegay Jimmie Åkesson.
Su’aasha la xiriirta xubin-nimada ururka Midowga Yurub oo uu xisbigiisu ka soo hor jeedo ayuu sheegay Jimmie Åkesson inuu ku taagan yahay sidii loo suurtagelin lahaa Sweden inay ka baxdo Midowga Yurub:
-EU aniga iima ahan waddadii lagu gaari lahaa wada shaqeeynta Yurub. EU waa urur siyaasadeed ka sarreeya awoodda dawladaha. Siyaasiyiin aan loo dooran, loo codeeyn karin, ka awood badan anigeygan xildhibaanka ka ah baarlamanka Sweden. Waa xaalad ay igu adag tahay inaan aqbalo, sida uu sheegay Jimmie Åkesson. Isagoo hadalkiisii sii watana sheegay in runtii loo baahan yahay wada shaqeeyn dhex marta waddammada Yurub iyo caalamkaba, sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha guud ee hor yaala.
Hase yeeshee aannu middaa weligii diidanayn, sida uu sheegay.